BLAOGY RTN | Ankapobeny
Salama daholo Inty misy fampianarana Mopera Jezoita mahaliana tokoa (15 minitra eo ny faharetany).
Inty misy tononkalo kely momba ny Fahasambarana zaraina sy hatolotra ansika mpitoraka blaogy. Mazotoa azany mamaky. Fahasambarana Ilay Fahasambarana voajanahary Dia Hasambarana avy ao anaty Tsy misy rohy toy ny voambary Fa ao am-po tsy mety maty Nahazo ny anjarany avokoa...
Manomboka tonga saina tsikelikely ny olombelona eto an-tany, noho ny fitomboan'ny adiady sy fijaliana eto antany. Ka nahatonga ahy niheno ny feo ao anatiko mankany amin'ny tena "fahamarinana", tsy inona izany fa ny fampiharana ny "Pleine Conscience". Amin'izao fotoana izy io dia...
Akory ny ahagagako fa mihamaro ireo tanora no tratran'ny " Hypertension " any Madagasikara, toy ny aty amin'ny tany mandroso.Marina hoe eo ny fihazakazahan'ny fiainana fa eo ihany koa ny sakafo hohanina, indrindra ireo karazana sira hamidy any antoerana misy be Ioda. Na ny ankizy koa...
Inty izay misy tononkalo zaraina aminareo mpitoraka blaogy, aingampanahy izy inty azo taorinan'ny namakiana ilay boky "Le Pouvoir du Moment Présent" an 'i Eckhart Tolle "Ny Ankehitriny Ihany" Aza mamiza-tena mitodika mijery ny lasa Mahatsiaro ireo jaly maloto tsy voasasa Na...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Manaraka»